Soosaarayaasha Masaska & Soosaarayaasha Sanjabiilka - Shiineyaasha Snake Hooks & Tongs Soo saareyaasha & Warshadaha
Masaska cusub ee masaska cas
Magaca Badeecada Kalluunka masaska cas ee Gaarka ah Nooca 70cm / 100cm / 120cm Waa la furi karaa / Lama-muujin karo Qalabka Casaanka Aluminium Qaabka NFF-50 Feature Waxaa lagu heli karaa 3 cabbir, laab laaban karo oo aan la arki karin oo la xusho. Qalabka aluminium ee aluminiumka, anti-miridhku iyo waara. Nashqadeynta xajmiga ah ee ballaadhan, si adag u xajista, wax masiibo ah uma leh masaska. Iyada oo leh silig bir leh oo bir leh oo 1.5mm ah, oo lagu rakibay rivets, nolosha adeegga dheer. Naqshad gacmeedka Ergonomic, fudud oo raaxo leh in la isticmaalo. Hordhac abeesada masaska eeani waxay ka kooban tahay digaag ...
Guluubka masaska birta leh
Magaca Badeecada bir aan xabbadda lahayn ee bir jilicsan oo bir leh oo leh tirtirid gaar ah Midab 70cm / 100cm / 120cm Qalabka qalin ee birta aan caadiga ahayn NFF-29 Feature body tube steel steel, anti-miridhku, waqtiga adeegga dheer. Naqshadeynta balaaran ee xargaha, si adag u xajista, wax masiibo ah uma leh masaska. Gacanta mashiinka leh ee qufulku kor ayey kor ugu qaadi kartaa mashiinka gacanta, si isku xirku u furnaan doonin markaad sii daayo. Waa la laalaabi karaa, si fudud baa loo qaadi karaa. Iyada oo quful lagu hagaajin karo. Iyada oo leh silig bir leh oo bir leh 1.5mm. Isbarasho
Mashiinka birta bir daxalanaya
Magaca Badeecada Gawaarida Mashiinka Birta ah ee Nooca 70cm / 100cm / 120cm Iyadoo qufulka / Iyadoo aan la qufulin Waxyaabaha Cagaaran ee Birta / Birta ah ee loo yaqaan 'NFF-03 Muuqaalka' Waxaa lagu heli karaa 3 cabbir, oo leh quful ama xirmid la'aan inaad doorato. Jirka tuubbada birta oo birta ah, miridhku ka soo horjeedka, miridhku dheer yahay. Naqshadaynta qafiska culaysku sii buufiyo, si adag u xajista, oo aan waxyeello u gayn abeesooyinka. Naqshadeynta xargaha qafiifka ah, oo raaxo leh in la isticmaalo. Gacanta mashiinka leh qufulku waxay kor u qaadi kartaa fekerka gacanta, markaa ...
Qalabka birta ee birta ku shaqeeya ee birta
Magaca Badeecada Lacagta birta ee birta ah ee jilaaca ah Nooca 68cm Qalinka Waxyaabaha birta ka sameysan ee Model NG-03 Muuqaal Wadajir ah, si fudud loo qaadi karo. Waa la hagaajin karaa, dhererka ugu badan waa 68cm. Qabashada xajiska fudud ee isticmaalka fudud iyo raaxada Hordhaca abeesada abeesadu waxay ka samaysan tahay bir aan tayo fiican lahayn. Waa dabacsan yahay, fududahay in la qaado oo raaxo leh in la isticmaalo.
Duubo jilicsan oo bir ah oo bir jaban
Magaca Badeecada Madoow ee birta jilicsan ee birta ah Gaarka ah Nooca NG-01 66cm Madowga NG-02 100cm Qalabka Madoow ee Nalka-NG-01 NG-02 Muuqaalka Isku-Darka, oo si fudud loo qaadi karo. Waa la hagaajin karaa, dhererka ugu badan ee NG-01 waa 66cm, dhererka ugu badan ee NG-02 waa 100cm. Qabashada xajiska fudud ee isticmaalka fudud iyo raaxada Hordhaca abeesada abeesadu waxay ka samaysan tahay bir aan tayo fiican lahayn. Waa dabacsan yahay, fududahay in la qaado oo raaxo leh in la isticmaalo.